Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Tom Howard | Marijuana sy Hemp
Ampitomboy ny orinasanao cannabis ara-dalàna.
Manolotra maodely turnkey izahay ho an'ny fahazoan-dàlana, fitsipika ary fanajana ny fanjakana rehetra any Etazonia izay ara-dalàna ny karazana rongony na hemp.
Mpisolovava cannabis izahay izay manana sy miasa orinasa amin'ny indostria ary manana fahalalana lalina momba ny risika sy ny fironana. Ny fahaiza-manaonay dia afaka manampy ny orinasanao hahazo tombony amin'ny fifaninanana ary hanalefaka ny risika amin'ny asa.
Tokony hisafidy LLC, C-corp, na S-corp ve ianao?
Safidy fianarana samirery
Fianarana an-tserasera izay manome fanampiana mifantoka amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha.
Afaka miara-miasa aminao izahay amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasao.
Inona no mitokana antsika?
Niara-niasa tamin'ny orinasa rongony am-polony nandritra ny taona maro izahay, nanomboka tamin'ny mom-and-pops ka hatramin'ny mpilalao lehibe. Avy any California mankany Florida, New Jersey ka hatrany Colorado, ary ny fanjakana rehetra eo anelanelan'ny toerana misy ny rongony na hemp ara-dalàna dia nanampy olona toa anao hahatratra ny tanjon'ny orinasa izy ireo. Isaky ny mpanjifa vaovao, ny zavatra niainantsika amin'ny lafiny ara-dalàna amin'ny rongony dia manjary voarary sy voadio kokoa satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna sy lalàna mifehy ny fanjakana. Vokatr'izany dia fantatsika tsara ankehitriny ny lalàna momba ny rongony isaky ny fanjakana any Amerika. Ny mpisolovava antsika mpanorina, Thomas Howard, dia nandany ny folo taona voalohany naha mpisolovava azy lasa mpivarotra fivarotana manana fahazoan-dàlana (fahazoan-dàlana 7 & 66) ary avy eo nisolo tena ireo andrim-bola amin'ny fifanakalozana azo antoka. Niara-nametraka fanadihadiana fohy izahay ho an'ireo mpanjifa vaovao hanampy anay bebe kokoa hahatakatra ny tanjon'ny orinasa sy ny orinasa.
Ny mpisolovava rongony tsara dia hanampy anao amin'ny fananganana orinasa sy ny fiasan-drongony, ny fananganana zona & famelana ary ny fanajana ny fahazoan-dàlana eo an-toerana sy ny fanjakana.
Famandrihana Session stratejika
Mifandraisa amin'ireto biraon'ny lalànan'ny fanjakana marobe ireto anio raha mila fanampiana amin'ireto olana ara-barotra rongony manaraka ireto:
Fanarahan-dalàna amin'ny fanjakana
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fanjakana
Varotra & marketing nomerika
Fikambanana sy famoahana
Ny mpisolovava antsika, Tom Howard, dia eken'ny mpisolovava roa sy mpisolovava lehibe, voatonona ao amin'ny Wall Street Journal & Marijuana Business Magazine. Manohana ny komity ara-dalàna NORML sy ny NCIA izahay.
Inona no hevitra tsy fahaizanao?
Eto ianao dia hahita fampahalalana iray taonina amin'ny lalàna rongony isaky ny fanjakana, ao anatin'izany ny fomba fanokafana dispensary sy / na fananganana tobim-pamokarana rongony ao amin'ny fanjakanao. Ny mombamomba anay dia havaozina saika isan'andro ary atolotray anao mandrakariva ny angona farany misy.
Fifanarahana loharanom-bola any New Jersey Cannabis
Inona avy ireo fifanarahana loharanom-bola ao amin'ny New Jersey Cannabis? Ny fifanarahana loharanom-bola araky ny lalànan'ny rongony New Jersey dia ny fifanarahana izay misy andalana fiarovana ary
Azonao atao ve ny manana orinasa rongony miorina amin'ny vertika any New Mexico?
Taorinan'ny fandaniana lalàna vaovao momba ny rongony any New Mexico, dia nisy fikorontanana be. Noho izany, very hevitra ny olona momba ny karazana fahazoan-dàlana izay
Lalànan'ny rongony vaovao: fahazoan-dàlana any New Mexico
Nandritra izay 11 taona lasa izay dia nahazoana alàlana ny rongony hampiasaina amin'ny fitsaboana any New Mexico. Ireo mpikatroka mafàna fo dia nanandrana nanala ara-dalàna ny rongony amin'ny karazana rehetra